Raw Lorcaserin HCL Powder (846589-98-8) Ndị na-emepụta - Phcoker
Raw Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ bụ serotonin 2C (5-HT2C) agonist na-anabata ọgwụ ma na-eji ọnụ ekwu okwu ọgwụ nke na-akwalite….
ikike: 1380kg / ọnwa
Ezu uzo Lorcaserin HCL (846589-98-8) video
Raw Lorcaserin HCL powder (846589-98-8) Nkọwapụta
Product Name Raw Lorcaserin Hydrochloride ntụ ntụ
Chemical Aha Raw Lorcaserin HCL ntụ ntụ, Lorcaserin
molekụla Fnhazi C11H15Cl2N
molekụla Wasatọ 232.15
Nkịtị Monoisotopic 231.058154899
Ọkara Ndụ nke Ndụ Ọkara ndụ nke ụbụrụ bụ ihe dị ka awa 11.Lorcaserin ntụ ntụ na-ewepụ kpam kpam n'ime mmamịrị (92%) na na feces (2.2%)
Solubility Mmiri mmiri: 0.0709 mg / ml
nchekwa Tigwe -20 Celsius C.
Antinye Onye na-anakwere onye na-anabata ihe nchịkwa 2C (HT2C) maka ụkọ ọnwụ.Dịbe nri oriri ma na-akwalite sitiety centerrally
Raw Lorcaserin Hcl powder (846589-98-8) Nkọwa
Raw Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ bụ hydrochloride nke enwetara site na mmeghachi omume nke ntụ ntụ lorcaserin na otu ihe nhata nke hydrochloric acid. Ejiri dị ka ọgwụ mgbochi oke ibu. Lorcaserin hydrochloride bụ 5HT2c agonist na-anabata ihe gosipụtara maka iji ndị okenye nwere BMI a30, ma ọ bụ ndị nwere BMI -27 ma ọ dịkarịa ala otu ọnọdụ metụtara ibu dị ka ọbara mgbali elu, pịnye ọrịa shuga 2 ma ọ bụ dyslipidemia. na-ebute mmetụta nke afọ ojuju, ma echee na ọ ga-ezere ọdịda nke ọrịa valvular obi nke ejikọtara na ntinye nke ndị natara 5-HT2B, mpaghara ụbụrụ a maara na ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa n'ịchịkwa agụụ na nri. Site na ime ka ndị nnabata a rụọ ọrụ, Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ nwere ike belata nri nri site na ibelata agụụ ma mee ka mmadụ nwee afọ ojuju ọbụlagodi mgbe iri obere nri karịa ka ọ dị na mbụ. a kwadoro ya taa site na FDA na mkpebi dị ịrịba ama mgbe afọ 2 nyochachara.
A na-egosi na ntụzigharị Lorcaserin hydrochloride dị ka ihe dị iche iche na nri dị ala-calorie na ịrụ ọrụ anụ ahụ na-arịwanye elu maka nlekọta ahụike na-adịghị ala ala (BMI nke 30 kg / m2 ma ọ bụ karịa) na ndị buru ibu (BMI nke 27 kg / m2 ma ọ bụ karịa) ya na ọ dịkarịa ala otu ọnọdụ na-abaghị uru.
A na-eji ntụ ntụ nke Lorcaserin hydrochloride mee ihe na nri na mmega ahụ iji na-emeso oke ibu. A na-ejikarị ya eme ihe n'ịba oke ibu nke nwere ike ibute ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Lorcaserin hydrochloride agaghị agwọ ọrịa ọ bụla (dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ọbara mgbali elu). Nọgide na-ewere ọgwụ ọ bụla dọkịta gị nyere iwu iji mesoo ọnọdụ ndị a.
Ọkụ Lorcaserin Hcl (846589-98-8) Nhazi nke Action
Ọ bụ ezie na amataghị usoro ahụ kpọmkwem, a kwenyere na ọ gụnyere itinye aka nchịkọta nke ndị natara 5-HT2C na mkpụrụ ndụ pro-opiomelanocortin anorexigenic na akwara nke hypothalamus. Nke a na - ebute nri nri na satty site na ịkwalite ịhapụ mkpụrụ ọgwụ alpha-melanocortin na - akpali akpali, nke na - eme ihe na ndị na - anabata 4 melanocortin - XNUMX.
Lorcaserin hydrochloride ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na ịchịkwa agụụ - kpọmkwem site na ime ka ndị nabatara ụbụrụ maka serotonin, neurotransmitter nke na-akpali mmetụta nke afọ ojuju na afọ ojuju. A na-achịkwa nri dị na satiety center, nke dị na oghere ventromedial nke hypothalamus na ebe agụụ na-anọ na mpụga hypothalamus. Ntinye dị iche iche site na ebe dị elu na traktị eriri afọ na-agbakọta na oghere arcuate, ebe ụdị akwara abụọ na-achịkwa nri nri dị. Nke mbu, otu nri na-akpali akpali na-emeputa protein na neuropeptide metụtara agouti; na nke abuo, ndi na-egbochi nri iri nri ndi nwere cocaine na amphetamine na-achikota transcript (CART) na pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. POMC nwere ndị natara 5-HT 2C, nke mgbe arụ ọrụ na-ewepụta hormone na-akpali akpali alpha-melanocyte (alfa-MSH). Ngwurugwu nke paraventricular nwere ndị na-anabata 4 melanocyte (MC4R) nke na-egbochi agụụ na ọgwụgwọ ọgwụgwọ lorcaserin hydrochloride ntụ dị ka nhọrọ 5-HT 2C agonist na POMC neurons, nke na - akpata ịhapụ alfa MSH. Ọzọ MSA MSH na-eme ihe na MC4R na ngwongwo paraventricular na hypothalamus, na-eduga n'ịbelata agụụ. N'ime usoro ọgwụgwọ supratherapeutic, lorcaserin hydrochlorider na-emekwa ihe na 5-HT 2B na ndị natara 5-HT 2A.
uru nke ntụ ntụ Lorcaserin Hcl (846589-98-8)
Ọkụ Lorcaserin HCL bụ onye na-ahọrọ aghara aghara nke 5-HT2C bụ nke a na-eche iji belata nri oriri site na usoro POMC kachasị. Lorcaserin HCL ntụ ntụ uru:
A na-ejikọta ntụ ntụ Lorcaserin HCL na nri na mmega ahụ iji na-emeso oke ibu.
A na-ejikarị nkwonkwo Lorcaserin HCL eme ihe mgbe ụfọdụ iji na-emeso oke ibu nke nwere ike ịkọ na ọrịa shuga, cholesterol dị elu, ma ọ bụ ọbara mgbali elu.
Mkpụrụ mmanụ Lorcaserin HCL agaghị agwọ ọrịa ọ bụla (dịka ọrịa obi, ọrịa shuga, ọbara mgbali elu).
Na-atụ aro ka ọkụkọ Lorcaserin Hcl (846589-98-8) Dosage
Lorcaserin HCL ntụ ntụ na-abịa na mbadamba ụrọ ma were ya 1-2 ugboro ugboro n'ụbọchị, na ma ọ bụ na-enweghị nri. A ghaghị iji Lorcaserin tinyere nri calorie belatara na atụmatụ mmega ahụ.
Ngwado a na-atụ aro nke lorcaserin hcl ntụ ntụ bụ 10 mg na-enye n'ọnụ site ugboro abụọ n'ụbọchị. Enwere ike iwere Lorcaserin na-enweghị nri. Lorcaserin hcl kwesịrị ịkwụsị ndị ọrịa na-enweghị ike ịnweta ma ọ dịkarịa ala, 5% ọnwụ ọnwụ site na izu 12 ebe ọ bụ na ndị ọrịa a agaghị enwe ike ịba ụba dị oke mkpa na ịga n'ihu ọgwụgwọ.
mmetụta nke ntụ ntụ Lorcaserin Hcl (846589-98-8)
A na-eji Lorcaserin Hcl uzuzu eme ihe maka ọgwụgwọ nke njikwa ibu arọ na-adịghị ala ala na ndị okenye nwere nchịkọta anụ ahụ (BMI) nke 30 ma ọ bụ karịa (obese) dị ka mgbakwunye na nri na kalori na-ebelata. A kwadoro ya ka ndị okenye nwere BMI nke 27 ma ọ bụ karịa (buru ibu) ma nwee opekata mpe otu ọnọdụ metụtara oke dị ka ọbara mgbali elu (ọbara mgbali elu), ma ọ bụ cholesterol dị elu (dyslipidemia). Agbanyeghị, ọ nwekwara ike ịnwe ụfọdụ nsonaazụ. Dị ka n'okpuru:
▲ Tọ bụ mmetụta kachasị emetụta ya:
▲ Ihe ndị ọzọ na-adịghị ahụkarị ma ọ bụ dị egwu na-emetụta ya na lorcaserin gụnyere: